GOS-P3: Kuongorora yakakura uye iri kukura Google Open Source - Chikamu 3 | Kubva kuLinux
GOS-P3: Kuongorora yakakura uye iri kukura Google Open Source - Chikamu 3
Mune izvi chetatu yenyaya dzino pamusoro «Google Open Source » Isu ticharamba tichiongorora yakafara uye inokura katarogu yemavhura mashandisirwo akagadzirwa ne Tekinoroji Giant de «Google".
Kuti uite kudaro, ramba uchiwedzera ruzivo rwedu nezve vhura maapp yakaburitswa neimwe yeiyo Tech Giants kubva kuboka rinozivikanwa se GAFAM. Chii, sekuziva kwakawanda, chinoumbwa nemakambani ekuNorth America anotevera: "Google, Apple, Facebook, Amazon neMicrosoft".
Ndichiri, kuongorora iyo Yapfuura zvikamu zviviri zveruzhinji Unogona kudzvanya pane inotevera chinongedzo:
GOS-P2: Kuongorora yakakura uye iri kukura Google Open Source - Chikamu 2
1 GOS-P3: Google Vhura Source - Chikamu 3
1.1 Google Open Source kunyorera
1.1.3 Koliflower Vest
GOS-P3: Google Vhura Source - Chikamu 3
Applications of Google Open Source
Iyo raibhurari yekare yesoftware, ikozvino isingachashandi uye yakatsiviwa naJetpack CameraX yaive nechinangwa chekubatsira vagadziri veApple kubatanidza zvirinyore kamera mabasa. Inoda chikamu cheAPI 9. Raibhurari inoshandisa Kamera 1 chikamu cheAPI kubva pa9 kusvika pa20, uye yeKamera 2 chikamu cheAPI chiri pamusoro makumi maviri neshanu. Pakati pezvinhu zvacho pane: Kutariswa kwekamera nekuiisa muchimiro XML nekumisikidza nehunhu, senge chikamu chechikamu (app: factorRatio), iyo otomatiki tarisa (app: autoFocus) uye kushandiswa kweFlash (app: flash). ona zvimwe pa: Google Open Source y GitHub.
Iyo sisitimu iyo inopa panguva imwe chete nzvimbo uye mepu (SLAM) munguva chaiyo mu2D uye 3D pane akawanda mapuratifomu uye masensa masisitimu. Iyo yakavakirwa Google's bhegi rekumaka mepu chikuva, kuti ibudirire chaiyo-nguva mepu uye loop kuvharwa pa5 cm resolution. Mhedzisiro yekuyedza uye kuenzanisa nedzimwe nzira dzinozivikanwa dzinoratidza kuti, maererano nehunhu, Cartographer anokwikwidza nemaitiro akasimbiswa. Naizvozvo, inoshandiswa paGoogle Street View kumepu yemukati yezvivakwa. ona zvimwe pa: Google Open Source y GitHub.
Yekutora kiyi escrow mhinduro. Icho chinangwa cheichi chirongwa ndechekugadzirisa kuyambuka-chikuva bhizinesi manejimendi e disk encryption tekinoroji Iyo projekiti pakutanga yakatanga ne FileVault 2 rutsigiro rweMac OS X, uye gare gare yakawedzera rutsigiro rweBitLocker (Windows), LUKS (Linux), uye Duplicity. Uye inopa, pakati pezvimwe zvinhu, mukana wekungoisa wega makiyi ekudzoreredza pane yakachengeteka Google App Injini uye kugovera kupinda kwakachengeteka kumakiyi ekudzorera kuitira kuti mavhoriyamu avhurwe kana kudzoserwa. ona zvimwe pa: Google Open Source y GitHub.
Iyo ndiyo hwaro hwazvino hweGoogle yega yakavharwa webhu bhurawuza inonzi Google Chrome. Naizvozvo, iyo yakavhurika vhezheni yacho, iyo inomira kuve yakajeka, yakachengeteka, inokurumidza uye yakasimba. Payakavhura, yakaunza sandbox chengetedzo modhi, diki mushandisi mushandisi, uye yakaiswa tabo windows maneja ayo mamwe akawanda mabhurawuza akagamuchira kubva ipapo. Chromium parizvino ndiyo hwaro hweazvino uye anoshandiswa mabhurawuza ewebhu, akasimba uye anoshanda zvabuda kuti kunyangwe vhezheni yazvino yeMicroSoft's browser, Edge, ikozvino yakavakirwa pairi. ona zvimwe pa: Google Open Source, repo y Yepamutemo Webhu.
Icho chishandiso che software chakagadzirwa kushandura uye kufambisa kodhi pakati pezvinyorwa. Semuenzaniso, kesi yakajairika uko kwainogona kushandiswa inogona kutsanangurwa seapo chirongwa chinosanganisira kuchengetedza zvakavanzika repositi uye yeruzhinji repository muchienderana. Muchiitiko ichocho, Copybara inoda kuti imwe yemapositori isarudzwe kuve ine chiremera reposvo, kuitira kuti panogara paine sosi yechokwadi. Nekudaro, chishandiso ichi chinobvumira mipiro kune chero chinhu chinochengeterwa, uye chero dura rinogona kushandiswa kucheka vhezheni. ona zvimwe pa: Google Open Source y GitHub.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" pane ino yechitatu kuongorora kweiyo «Google Open Source», Inopa zvinonakidza uye zvakasiyana siyana zvinoshandiswa zvakavhurwa neTechnological Giant ye «Google»; uye iri yekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » GOS-P3: Kuongorora yakakura uye iri kukura Google Open Source - Chikamu 3
FreeFileSync: Vhura Source App kuti uenzanise mafaira uye maforodha